I-Instagram Statistics Ngaphandle kokuba yiNkampani Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Izibalo ze-Instagram ngaphandle kokuba yinkampani
NgoFebruwari 23, 2019 0 IiCententarios 1028
Ixesha lentlalontle kunye netechnology sele lifikile. Kwiminyaka ethile kukho ezininzi iinethiwekhi zentlalo ezikhutshiweyo. Ngokusebenzisa aba basebenzisi kufuneka babe nakho Nxibelelana nabahlobo bakho eqongeni kwaye unxibelelane ngeendlela ezahlukeneyo kunye nabo. Ngamaxesha amva nje, i-Instagram ibeke endaweni yayo njengenye eyaziwa kakhulu kwaye isetyenziswa ngabasebenzisi. Ukongeza, a Inani elikhulu leenkampani Sele beqalisile ukusebenzisa inethiwekhi ebhengeziweyo ngenjongo yabo. Kungenxa yoko le nto abasebenzisi abaninzi bafuna ukufumana izibalo ze-Instagram ngaphandle kokuba yinkampani.
Okuninzi okufunwe yinethiwekhi yezentlalo, izinze njenge okwesibini kwihlabathi liphela ngabasebenzisi abaninzi. Kule nto, i-600 kwafuneka ifikelele kwizigidi zabasebenzisi abasebenzayo ngenyanga, ibekwe nje kwi-Facebook, kwinqanaba. Iqonga kufuneka livumele abantu abathile Thumela iifoto kunye neevidiyo ukuthanda kwakho Ngendlela efanayo kufuneka babe nako ukongeza inkcazo kupapasho, ngokomnqweno womsebenzisi. Ukongeza, isicelo esimiselweyo kuya kufuneka size noluhlu olubanzi lwezixhobo ukuze senze amava omsebenzisi aphumelele.
Ezinye izixhobo ezisetyenziswa kakhulu namhlanje zidumile Amabali e-Instagram Ngale ndlela elula kwaye esebenzayo, abasebenzisi baya kuba nakho ukupapasha inani elingapheliyo lemifanekiso, ilizwe kunye nevidiyo. Ngale ndlela, abanye abantu abenethiwekhi kufuneka babe nakho ukuyibona, nangona kunjalo, amabali enethiwekhi kuphela Ixesha leeyure ze-24. Oko kukuthi, ukuba emva kokudlula ixesha elimiselweyo, abakhankanyiweyo kuya kufuneka bayisuse. Ukuvumela ngale ndlela, kuphephe ukulayisha ngaphezulu iprofayili yomntu ebuzwa.
Rhoqo abantu bafuna ukwazi ukuba benza njani kwangaphambili kwinethiwekhi I-Instagram Kukubo ukuba izibalo ze-Instagram ziceliwe ngaphandle kokuba yinkampani; kuba abantu bendalo nabo banqwenela ukuyifumana. Ngabo, abasebenzisi baya kuba nakho ukwazi ukuba banemali engakanani wandise abalandeli bakho kwaye nendlela ulwalamano lwabo lukhule ngayo. Ngokufanayo, unokufunda indlela abadume ngayo amabali abo kunye nabo inqanaba eliphambili okanye lokubuyisa umva eqongeni
"I"mna ugusta”I-Instagram yaziwa kakhulu kwihlabathi. Baninzi abasebenzisi ekufuneka befuna ukwazi ukuba yanda ngokuthandwa. Ngale ndlela, kunokucingelwa ukuba udumo lomntu ngamnye lubonakalisiwe. Ewe, ukuba intsabelo yabalandeli kufuneka iguqulwe njenge ukwamkelwa kunye nolonwabo ngabanye abasebenzisi
I-Metricool yezibalo ze-Instagram ngaphandle kokuba yinkampani
Ukwenza izibalo ze-Instagram zangaphakathi ngamanye amaxesha kunokuba Kunzima kwaye kunqongophele. Ke ngoko, kuya kuba ngcono ukuba umntu lowo ayazi idatha evela kwisicelo sangaphandle. Ngenxa yoku, isicelo seMetricool sikwazile ukugqama kule ndawo. Ngayo, abasebenzisi banokudibana izibalo ezibalaseleyo I-Instagram ngaphandle kokuba nkampani
Ukongeza, ine- Inketho yasimahla, apho umntu kuya kufuneka akwazi ukufikelela kuzo zonke iinkcukacha zeakhawunti ngokuvumelanisa iiakhawunti ezintlanu zenethiwekhi yoluntu, i-Facebook, i-LinkedIn, i-Twitter, i-Instagram kunye neBhlog. Ngapha koko, kunokwenzeka ukuba wandise ukusetyenziswa kwesicelo ngokusebenzisa i Inguqulelo yePRO, ehambelanisa ukuya kwii-akhawunti ezahlukeneyo ze-10.
Ukongeza, iqonga leMetricool lihlala liphucula, ukongeza imisebenzi entsha kwaye yenze ukuba ibe nomtsalane ngakumbi eluntwini. Nokuba ezinye iinethiwekhi zontlalontle uneendlela zokuthelekisa phakathi kweakhawunti yomsebenzisi neyakho ukhuphiswano kwimarike
Unokwenza ntoni nge-Metricool?
Xa usebenzisa isicelo seMetricool ukwazi izibalo ze-Instagram ngaphandle kokuba yinkampani, kuya kufuneka ube nombono othile Iimpawu zomdla. Kwale nto, kufuneka ikwazi ukusuka kokuthandwa, ukuvelisa kwakhona kunye nembono yamabali, ukuba inyani okanye yehla njani abalandeli eqongeni. Ngalesi sixhobo kuya kwenzeka ukuba umsebenzisi ahlaziye, alawule kwaye ade ukulinganisa ukusebenza Umxholo opapashiweyo. Ke, ujongano luvumela umntu ngamnye ukuba babone indawo abahlala kuyo, amabali kunye nezithuba kwisicelo se-Instagram.
Metricool ikuvumela ukuba ubone umsebenzisi igrafu apho ukukhula koluntu zabalandeli kwiinyanga zokugqibela. Ukwenza oku, kufuneka ubonise inani labalandeli abatsha beakhawunti, kunye nenombolo yeeakhawunti ezilandelwa ngumntu lowo. Ukongeza, iya kuvumela ukwazi i Ilahleko yabalandeli elahlekileyo, upapasho lwemihla ngemihla kunye nezikhundla zizonke zeveki ephelileyo.
Xa unika izibalo zamabali ukusuka kwi-Instagram, isicelo seMetricool siza kubonisa ububanzi, impembelelo kunye nobungakanani Amabali e-Instagram ewonke alayishwe kwiveki. Ukongeza, iya kuvumela umsebenzisi ukuba achaze ukuba loluphi uhlobo lomxholo oluya kukhethwa kakhulu ukuphucula ukufikelela kwalo. Ngendlela efanayo abayazisa ngayo kufuneka ivele ngokweenkcukacha kwitafile eya kubaququzelela ngayo ngokwesondo, iminyaka, amazwe kunye neendawo Abasebenzisi abayibonileyo.
Iya kuvumela umsebenzisi ukuba azi Upapasho lwakho lubhengezwe njani. Ngamanye amagama, yintoni eyona nto efikelele kuyo ephezulu yokuba izithuba zemihla ngemihla zifumana. Ngale ndlela umntu lowo uya kukwazi umxholo oyithandayo kwaye ucalucalulo lwabantu apho kuya kufuneka ujolise kwiakhawunti yakho ye-Instagram.
2 Izibalo ze-Instagram
3 I-Metricool yezibalo ze-Instagram ngaphandle kokuba yinkampani
4 Unokwenza ntoni nge-Metricool?
NgoFebruwari 23, 2019
Ungayithumela nini kwi-Twitter ungayiphosi!
Izibalo zeYouTube Funda ukuba nazo!